व्रतका बेला यौन सम्बन्ध राख्नु हुन्छ कि हुँदैन ? के भन्छन् डाक्टर ? – Jagaran Nepal
व्रतका बेला यौन सम्बन्ध राख्नु हुन्छ कि हुँदैन ? के भन्छन् डाक्टर ?
खाना खाएर वा पेट टन्न पारे देवीदेवताको पूजा गर्न नमिल्ने होइन तर मन मान्दैन, चित्त बुझ्दैन,, अप्ठ्यारो लागिरहन्छ । बुधबार, बिहीबार गणेशको पूजा गर्न नमिल्ने होइन तर मंगलबार गरेजस्तो सन्तुष्टि पाइँदैन । त्यसै गरी धार्मिक हिसाबले व्रत बस्ने भएकाले धर्मबाट निर्देशित कतिपय कुराका विरुद्ध जान मान्छेको मनले मान्दैन । नियम पालना गर्ने\_ नगर्ने आफैँमा निर्भर हुन्छ । यो कुरालाई पृथक राख्ने हो भने कतिपय मानिस व्रतका बेला यौन सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् तर ‘पाप लाग्ला कि’, ‘धार्मिक मान्यताविरुद्ध हुन्छ कि’ भन्ने डरले यौन सम्बन्ध राखिरहेका हुँदैनन् । तर, व्रतका बेला शारीरिक सम्पर्क वर्जित नै गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
मद्यपान वा अन्य नशाको प्रभावमा पुरुष पार्टनरका तर्पmबाट यौन कार्यका लागि करकाप हुन सक्छ । यस्तो बेला के गर्ने, यस्तो परिस्थितिको कसरी सामना गर्ने भन्ने सवालमा महिला र पुरुषबीच सामञ्जस्य र सहभाव हुनुपर्छ । यौन सम्पर्क कार्य केवल भौतिक मात्र नभई त्यसमा दम्पतीबीच समझदारी र सहयोग आवश्यक हुन्छ । त्यसैले पुरुष पार्टनरले चाहेर मात्र यौन सम्बन्ध राख्नु भनेको सम्भोग नभई मैथुन कार्य मात्र हुन जान्छ । मैथुन र सम्भोगबीच तात्विक भिन्नता छ ।
यौन सम्पर्कका बेला यौन उत्तेजना आउने, स्खलित हुने र चरम सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने कार्यमा महिला र पुरुषबीच भिन्नता हुन सक्छ । अतः दुवैको समझदारीमा सम्भोग कार्य हुनुकोमहत्व फरक हुन्छ । पुरुष र महिला दुवै शारीरिक एवं भावनात्मक रूपमा एकाकार भए पनि मैथुन शब्दले शारीरिक पक्ष र सम्भोगले संवेगात्मक पक्षलाई महत्व दिएको हुन्छ । मैथुन कार्य शारीरिक मात्र हो । यो सन्तान उत्पादनका लागि पर्याप्त भए पनि सम्भोगमा दुवै जनाले चरमसुख प्राप्त गर्छन् ।
केही दिनको विश्रामपछि यौन सम्बन्ध राख्दा झन् सन्तुष्टिजनक हुने गर्छ । व्रत बसेकी महिला पनि व्रत समाप्त भएपछि मानसिक रूपमा यौन कार्यका लागि तयार हुने हुनाले उपवासका बेला यौन सम्पर्क नराख्नु उचित हुनेछ । लामो समयपछि भेट भइरहेको परिस्थिति नै भए पनि पार्टनर उपवासमा छ भने आफ्नो चाहना मात्र परिपूर्ति गर्नतर्पm लाग्नुभन्दा संयमित हुनु राम्रो हुन्छ । मानसिक सन्तुष्टि वा तयारीबिनाको यौन कार्य कागजको फूलजस्तै हुन्छ । जसमा न सुगन्ध हुन्छ, न सौन्दर्य।
वैज्ञानिक हिसाबले उपवास बस्नुका विभिन्न फाइदा छन् । यस कार्यले मधुमेह नियन्त्रण, प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि, मुटु र मस्तिष्कको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँछ । निश्चित समय सीमाको उपवासका अन्य धेरै फाइदा छन् । तर, कडा उपवासका बेला खाना वा झोलिलो खानेकुराको अभावमा शरीरमा शक्तिको मात्रा घट्न सक्छ । त्यस्तो बेला यौन प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ । निश्चय पनि यौनका लागि मानसिक रूपमा तयार हुन आवश्यक हुन्छ । शारीरिक सम्पर्कका क्रममा ऊर्जा खर्च हुन्छ । अतः धार्मिक दृष्टिले मात्र होइन, उपवासका बेला यौन गतिविधि नगर्नु स्वास्थ्यका हिसाबले पनि राम्रो हुन्छ । तर, तीव्र चाहना छ भने उपवासमा सहवास गर्नु अपराध चाहिँ होइन ।